Soo iibso SoundCloud Repages - TurboMedia.io
Waxay ka caawisaa helitaanka kalsoonida deg deg ah ee Xogtaada iyo Dhejintaada
Natiijooyinka waxay bilaabanayaan 24-72 Saacadood & Waa la dhameystiraa 5 maalmood gudahood
Waa inaad soo iibsato warbixinnada loo yaqaan 'SoundCloud' si ay kaaga caawiso ku faafidda erayga muusikadaada cajiibka ah iyo waxyaabaha ku jira. Waxaan la wadaagnay nuxurkaaga dhammaan aaladaha warbaahinta bulshada si kor loogu qaado soo bandhigista muusiggaaga iyo waxa ku jira. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad soo jiidato taageerayaal cusub aagagga aadan waligaa gaadhin. Adeegani wuxuu kaa caawin doonaa helitaanka koritaanka aad ugu baahan tahay si aad ula kulanto himilooyinkaaga ku saabsan SoundCloud.
Dhammaan amarradu waxay bilaabmaan 24-72 saacadood gudahood ka dib markii amarkaaga la dhigo. Xaaladaha badankood, tiradaada oo dhan ee warbixinnada SoundCloud waxaa la keenaa dhowr saacadood gudahood markii amarkaaga la dhigo, laakiin mararka qaarkood waxay qaadan kartaa maalin ama laba dheeraad ah, iyadoo ku xirnaanaysa tirada aad amartay. Waxaan si deg deg ah u gaarsiinnaa boggaga jecel Instagram-ka, marka waxaad ku heli doontaa hab ku habboon.